MinnyoMaharsan: အိပ်ယာမ၀င်ခင် အတွေးများ
မွေးဖွားကြီးပြင်းခဲ့တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် ဖြတ်သန်းခဲ့ရာ ပတ်ဝန်းကျင် လက်ရှိရောက်ရှိနေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် တွေက ရတဲ့ အတွေ့အကြုံလေးတွေကို မူတည်ပြီး အတွေးတစ်ချို့  ၀င်ဖြစ်တယ်…။ အခြေခံပညာ လေးတန်းနှစ်ထိ နံနက်ခင်းကျောင်းတက် ခေါင်းလောင်းထိုးတာနဲ့ ဆိုရတဲ့ သစ္စာဓိဌာန်လေးချက်က စပြောမှ ရမယ်။
‘‘ မိမိ ကိုယ်ကို ကောင်းအောင်ကြိုးစားမည်၊ မိမိကျောင်းကို ကောင်းအောင်ကြိုးစားမည်၊ မိမိရွာကို ကောင်းအောင်ကြိုးစားမည်၊ မိမိနိုင်ငံကို ကောင်းအောင်ကြိုးစားမည်‘‘ တဲ့။
တမျိုးတဖုံ နားလည်လိုက်တဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ မိမိကိုယ်ကို တိုးတက်ကြီးပွားအောင် အရင်ကြံဆောင်ပါ။ ပြီးရင် မိမိပတ်ဝန်းကျင် နောက်ထပ်ခါထပ်ခါ ချဲ့လို့ နိုင်ငံ၊ ကမ္ဘာ့ ပတ်ဝန်းကျင် က လူသားမျိုးနွယ် စတာတွေကို တိုးတက်ကြီးပွားအောင် အဆင့်ဆင့် ကြံဆောင်လုပ်ကိုင်ပါလို့ တွေးယူပါတယ်။ မိမိကိုယ်က တော်တဲ့ တတ်တဲ့ လူမဟုတ်ပဲ ပတ်ဝန်းကျင် က လူတွေကို တော်အောင်တတ်အောင် ကြီးပွားအောင် လုပ်ပေးချင်လို့ မလွယ်ပါဘူး။ မဖြစ်နိုင်ဘူးပဲ ပြောပါရစေ။ ခုချိန်မှာတော့ မိမိကိုယ်ကို ကောင်းအောင်ကြိုးစားရင်း နဲ့ လူ့သက်တမ်းတ၀က်ရောက်နေပါပြီ။ ကမ္ဘာကလူသားမျိုးနွယ်အတွက် နိုင်ငံက လူတွေအတွက် ပတ်ဝန်းကျင် မိသားစု အတွက်နေနေသာသာ မိမိကိုယ်ကို ရပ်တည်ဖို့တောင် မနည်းကြိုးစားနေရတဲ့ အခြေအနေမှာရှိပါတယ်..။ ဒါက စကားချီးပါ။ နောက်ဆက်ပြောမှာက ဒီနေ့ ရေချိုးရင်း စိတ်ကူးယဉ်တာပါ။ အထက်က သစ္စာဓိဌာန်လေးချက်ကို ကြိုက်သမို့ နိုင်ငံကို ဘယ်လိုတိုးတက် အောင်လုပ်မလဲ ဘာတွေလုပ်ကြမလဲ စိတ်ကူးယဉ်ကြည့်တယ်။ အင်း…အဆင့်ကတော့ နည်းနည်းကျော်နေပြီ။
သိပ်ရှုပ်တဲ့ ကိစ္စတွေကို စဉ်းစားတိုင်း စကားလုံးလေးတစ်လုံးပေါ်လာတယ်‘‘ KISS‘‘ တဲ့။ Keep It Simple, Stupid. တဲ့။ စတွေးစို့…။
လူတစ်ယောက် တိုးတက်ကြီးပွားဖို့ဆိုရင် အသိဗဟုသုတ အကြားအမြင် သိကျွမ်းခင်မင်ရာ မိတ်ဆွေ လိုပါတယ်…။ အဲဒါတွေနဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ နောက်တစ်ခုက သူ့ ရဲ့ အိပ်မက်ပါ။ စာပေဆိုရာမှာ မြန်မာစာဖတ်ကျွမ်းယုံမဟုတ် အင်္ဂလိပ်စာဖတ်ကျွမ်းခြင်းကိုပါဆိုလိုပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ရေးလိုရင်းက အဲဒီ အင်္ဂလိပ်စာပါ။ အဲဒီစာပေတွေက တဆင့် ကမ္ဘာတ၀ှမ်း သူ့အိပ်မက်ကို ဖြန့်နိုင်တယ်။ မြန်မာစာ မြန်မာစကားက ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲရှိသမို့ လွယ်လွယ်သင်ယူလို့ရပါတယ်..။ စာဖတ်ခြင်းကို ကျွမ်းဝင်ဖို့ သူကိုယ်တိုင်စိတ်မပါရင်တောင် မိဘတွေက ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းဖန်တီးပေးရင် မြန်မာစာဖတ်ချင်တဲ့ အလေ့ အပျော်တမ်းစာဖတ်လေ့ ရှိလာနိုင်ပါတယ်…။ မြန်မာလိုဘာသာပြန်ထားတဲ့ ဘာသာပြန်စာပေတွေကတဆင့် ကမ္ဘာကို သူစိတ်ကူးယဉ် ခြေဆန့်နိုင်တယ်။ စာဖတ်များလေ သူ့အိပ်မက်ကို ကြီးကြီးမက်ဖို့သိလာလေပဲ…။ ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်း (ပညာတတ်အသိုင်းအ၀ိုင်း၊ မြို့ ) ရောက်မနေရင်တောင် သူ့ ဘယ်လောက်ကြီးတဲ့ အိပ်မက်ကို မက်ရမလဲ သိလာလိမ့်မယ်..။ နိုင်ငံခြားမှာ ဘာကျောင်းတက်ရင် ဘာဖြစ်မယ် ဘယ်သွားရင် ဘယ်ရောက်မယ် ဘယ်လိုလူမှုဆက်ဆံရေးဆိုဘယ်လိုဆိုတာ မြို့ ပေါ်က ကလေးမှ သိတာမဟုတ် မြို့ နဲ့ ဝေးတဲ့ နယ်စပ်က ကလေးကလဲ စာဖတ်ကျွမ်းရင် သိနိုင်တယ်…။ ဆရာဖေမြင့် ဘာသာပြန်တဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်မှာ (အတိအကျတော့မမှတ်မိတော့) ဖခင်တစ်ယောက်ဟာ သူ့သမီး မြို့ ကျောင်းကို သွားတက်နေတာ သွားရလာရနဲ့ လူငယ်ဘ၀ အချိန်တွေကုန်ပြီး သိပ်ဆင်းရဲ နေတာ တွေ့တော့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း စဉ်းစားတယ်။ သူနေတဲ့ နေရာကလည်း မြို့ နဲ့ အင်မတန် အလှမ်းကွာဆိုပဲ။ ဒါနဲ့ အိမ်မှာ စာကြည့်ခန်း ကောင်းကောင်းလုပ်ပြီး စာများများဖတ်လို့ သူ့သမီးကို စာသင်ပေးလိုက်တာ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေကို ယှဉ်နိုင်တဲ့ လူမှု အသိ ပညာအသိတွေ ရတယ်တဲ့..။ ဒါ ယေဘုယျ ဆိုချင်တယ်…။ ပြောချင်တာ စာဖတ်ကျွမ်းရင် ရလာတဲ့ အသိပညာ၊ နဲ့ အနာဂတ်မျှော်မှန်းချက်တွေကို ဆိုလိုတာပါ…။
အင်္ဂလိပ်စာ အနေနဲ့ ပြောရင် တနိုင်ငံလုံး အတွက် စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်ကိုပါထည့် ပြောချင်တယ်…။ ဘာသာပြန်တွေက တဆင့် ကမ္ဘာ့ရေးရာ စာပေ ဗဟုသုတ သတင်းအချက်အလက်တွေကို လေ့လာတာ တိုက်ရိုက်မဟုတ်လို့ အချိန်နဲ့ တပြေးညီမဖြစ်တာတွေ သူဖတ်မိလို့ သူကြိုက်တာ ပြန်မှ ကိုယ်က ဖတ်ရတာတွေ စတဲ့ ဒုက္ခတွေ တွေ့ရတယ်..။ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ နယ်ပယ် က စာလည်း ရှိချင်မှ ရှိတယ်။ ဒီတော့ အင်္ဂလိပ်စာတတ်ဖို့ လိုလာပြီ…။ ဒီနေ့ကမ္ဘာမှာ ဒုတိယ ဘာသာစကားအဖြစ် အင်္ဂလိပ်ကို ကျွမ်းကျင်ခဲ့ရင်တောင် နှံ့စပ်တဲ့ သူ ဖြစ်နေပါပြီ။ ကမ္ဘာ့စာပေတွေ တော်တော်များများက အင်္ဂလိပ်လိုရှိတာကိုး။ မြန်မာ ကျောင်းသားတွေ ကမ္ဘာအနှံ့ ပညာရှာရာမှာ ဒါမှမဟုတ် မြန်မာကနေ ပြီး ကမ္ဘာပေါ်က ပညာရှင်တွေနဲ့ ချိတ်ဆက်လို့ တဆင့်တက်ပညာရှာရာမှာ ပညာသင်ကြားလာခဲ့တဲ့ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွေ မနိမ့်ဘူး။ အပြင်ကမ္ဘာကလူတွေနဲ့ ဆက်ဆံရာမှာတော့ ကိုယ့်ကို အထင်ကြီးဖို့ လက်ခံဖို့ဆို ပြောဆိုဆက်ဆံတတ်ဖို့ လိုလာပါပြီ။ ဖတ်နိုင်ရေးသားနိုင်ဖို့လည်း လိုလာပါပြီ။ မြန်မာတွေ ဘယ်လောက်ပဲ အင်္ဂလိပ်စာ တော်ပါတယ်လို့ ပြောကြပါစေ တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဆို မတော်ဘူး ပြောရမယ်။ မြန်မာရဲ့  နေ့စဉ်နေထိုင်မှု ဘ၀မှာ ဧည့်လမ်းညွှန်တွေကလွဲရင် တက္ကသိုလ် အဆင့်မှာတောင် ပြောဆိုဆက်ဆံမှု မရှိသလောက်နည်းပါတယ်။ မရှိရခြင်း နောက်တစ်ကြောင်းက နိုင်ငံခြား ကျောင်းသားမရှိဘူး မရှိတော့ အင်္ဂလိပ်လို လက်ချာ မရှိဘူး။ နိုင်ငံခြားသားမပါ စာတမ်းဖတ်ပွဲတချို့ မှာ ပြောကြသော်ငြား တကယ်လိုအပ်လို့ ပြောတာမဟုတ် လုပ်ပြောရတာဖြစ်လို့ ပြောရင်း သိပ်မရှင်းတော့ရင် ဗမာလို တွယ်ထဲ့လိုက်ကြတာပဲ။ အဓိကကတော့ နိုင်ငံခြားသားပညာရှင်တွေနဲ့ ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာ ပညာရှင်အဆင့် မြန်မာတွေ ထပြီး လေမကျယ်နိုင်ကြတာ ဘာသာရပ်ကို နားမလည်လို့မဟုတ် သူပြောတာနားလည်ကောင်း လည်သော်ငြား အင်္ဂလိပ်လို အကျယ်တ၀င့် မရှင်းနိုင်ကြလို့ပါ။ ဘုန်းတော်ကြီးတွေ ပါဠိစာပေတွေ တတ်ကျွမ်းသော်ငြား ပါဠိလို မပြောတတ်ကြတာနဲ့ ဆင်တူပါတယ်…။ ဒါတောင် မြန်မာ တက္ကသိုလ်ဆင့်တွေမှာ ဘာသာရပ်တွေကို အင်္ဂလိပ်လို ဆက်လက်ပြဌာန်းထားလို့ပါ။ မြန်မာတက္ကသိုလ်ထွက်တွေ နိုင်ငံခြားရောက်ပြီး တနှစ်လောက်နေရင် အင်္ဂလိပ်စကား သင်တန်း မတက်ဖူးခဲ့သော်ငြား အင်္ဂလိပ်လို အတော်ပြောတတ်ကြပါတယ်…။ ရွှန်းရွှန်းဝေအောင်ပြောဖို့နဲ့ ကွန်ဖရင့်တွေ စာတမ်းဖတ်ပွဲတွေ လူစည်ကားရာနေရာတွေမှာ လူတွင်ကျယ်လုပ်ဖို့တော့ ဒါနဲ့ မရပါဘူး။ စာတမ်းဖတ်ပွဲတစ်ခုမှာ စီနီယာ အာဖရိကန်တစ်ယောက် ရွှန်းရွှန်ဝေအောင်ပြောသွားတော့ သူ့ကို အားကျခဲ့ဖူးတယ်…။ ရောက်စမှာ သူ့ အသံထွက်က သိပ်မကောင်းသလိုရှိပေမယ့် ၁ နှစ်လောက်နေတော့ သူ့ အသံထွက်ကောင်းလာသလို ကိုယ်လည်း နားထောင်တဲ့ အကျင်းတိုးတက်လာတော့ သူပြောတာ ဘယ်လောက်ကောင်းတယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်တော့တယ်…။ အသံထွက်သိပ်မကောင်းတာက ခဏနေတော့ ကောင်းသွားပါတယ်….။ အင်္ဂလိပ် စကားပြော အခြေခံကောင်းတာနေမှာပါ…။
တခြားနိုင်ငံခြားရောက်ကျောင်းသားတွေကိုတော့ မဆိုလိုဘူး ကိုယ့်ကိုကိုယ် သုံးသပ်ကြည့်တော့ အင်္ဂလိပ်စာ မကောင်းတဲ့အထဲပါနေတယ်…။ အရင်းစစ်တော့ အမြစ်မြေက ဆိုသလို… မူလတန်း အလယ်တန်း အထက်တန်းတွေမှာ တကယ့် အသုံးချ အင်္ဂလိပ်စာ မသင်ခဲ့ရတာ အဓိကဖြစ်နေတယ်…။ အင်္ဂလိပ်ကောင်းတဲ့ သူတွေကို လေ့လာကြည့်တာ ဒုတိယ ဘာသာစကားအဖြစ် အပီအပြင်သင်ခဲ့ရတာတွေ့ရတယ်…။ ဂျာမန်မှာ ဘယ်တုန်းကမှ ဂျာမန်လိုမသင်ဖူးသူ တစ်ယောက်ကို ဂျာမန်စကားသင်ပေးတာ သတ်မှတ်ချိန် ၆ လပါ…။ ၆ လပြီးရင် အခြေခံ အကုန်ပြီးပါတယ်…။ထမင်းစားရေသောက် ပြောနိုင်ကြတယ်…။ ဂရမ်မာ ကုန်တယ်…။ ၆ လအတွင်းမှာ သင်တဲ့ သင်နည်းတွေကလည်း တကယ်ကို လက်တွေ့ကျကျ လေ့ကျင့်ကြတာ။ အင်္ဂလိပ်လို တခွန်းမပြောဘူး။ မရရအောင်ရှင်းတယ်။ ကစားနည်းမျိုးစုံသင်တယ်…။ တက္ကသိုလ်မှာ ဂျာမန်လို လက်ချာလိုက်ရတယ်ဆိုရင် နောက်ထပ်နှစ်နှစ်အတွင်း ကောင်းကောင်းကြီးပြောနိုင် ငြင်းနိုင်ခုံနိုင်တဲ့ အဆင့်ရောက်သွားပါတယ်…။ ဂျာမန်၊ အင်္ဂလိပ် ၊ ပြင်သစ် စတဲ့ အနောက်တိုင်း ဘာသာစကားတွေနဲ့ အရှေ့တိုင်းဘာသာစကားတွေကို ကျောင်းသားဆို တက္ကသိုလ်မှာ အခမဲ့ သွားတက်လို့ရသေးတယ်…။ ဘာသာစကားသင်ကျောင်းက သင်ပေးတာကတော့ ပိုကောင်းတာပေါ့။ စကားပြောပါတနာ ကို ကြော်ငြာဘုတ်မှာရှာပြီး ကျင့်လို့ရတယ်…။ စကားပြောဝိုင်းတွေ ရှိတယ်။ ကျောင်းသားများစုဝေးရာနေရာကတော့ စာကြည့်တိုက်နဲ့ Mensa လို့ခေါ်တဲ့ တက္ကသိုလ် စားရိပ်သာ သာဖြစ်တယ်။ ဘေး နည်းနည်းချော်သွားပြီ။
ကိုယ်တွေ့ ခံစားခဲ့တာတွေကို အခြေခံပြီး နိုင်ငံကို ဘာလုပ်ရင် အမြန်ဆုံး တိုးတက်နိုင်မလဲစဉ်းစားတဲ့အခါ အခြေခံအကြောင်းတရားအဖြစ် မူလတန်း၊ အလယ်တန်း၊ အထက်တန်း အင်္ဂလိပ်စာမြှင့်တင်ချင်တယ်။ အင်္ဂလန်၊ အမေရိကန်က အင်္ဂလိပ်ဆရာကို တစ်ယောက်ကို ဒေါ်လာ ၄၀၀၀ နှုန်းနဲ့ ၆ လစာ ၂၄၀၀၀ ကို အယောက်တစ်ရာစာ ၆ လ ဒေါ်လာ ၂၄ သိန်းဖိုး ငှားမယ်၊ (လက်ရှိသူတို့ နိုင်ငံတွေမှာလစာက ၃၀၀၀ လောက်ပဲဖြစ်တယ် အဲ..ဆရာဦးရေက တနိုင်ငံလုံးကျောင်းအရေအတွက်ကိုသိမှဖြစ်မယ်...ပိုနေရင်ဒုက္ခ) သင်တန်းက ၆ လ intensive course သင်တန်းသားတွေက တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ မူလတန်းကျောင်းတစ်ကျောင်းစီက တစ်ယောက်စီ ခေါ်ထားတဲ့ အင်္ဂလိပ်စာပြ ဆရာတွေပဲဖြစ်တယ်။ သင်တန်းသားဦးရေက ဆရာတစ်ယောက်ကို ၃၀ ထက်ပိုရင်မကောင်းဘူး။ မူလတန်းကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာရှိတဲ့ ဆရာတွေကို အင်္ဂလိပ်စာစစ်လို့ အမှတ်အများဆုံးဆရာကို သင်တန်းသားအဖြစ်ရွေးလို့ အဲဒီကျောင်းလေးတွေမှာ အင်္ဂလိပ်ဆရာခန့်မယ်။ အရှိန်အဟုန်ပြင်းပြင်းနဲ့ ဆောင်ရွက်ချင်ရင် တော့ အလယ်တန်း အထက်တန်း ဆရာတစ်ယောက်စီကိုပါ ခေါ်အုံးမယ်…ဒါဆို ဒေါ်လာ ၇၂ သိန်းဖိုးကုန်ကျလိမ့်မယ်…။ အဲဒီက ရတဲ့ အကျိုးဆက်ကို နောင် ၅ နှစ်က ၁၀ အတွင်းခံစားနိုင်လိမ့်မယ်…။ အကျိုးဆက်အနေနဲ့ နောက် ၁၀ နှစ်အလွန်မှာ နိုင်ငံတကာနဲ့ ဆက်သွယ်ပြီး နိုင်ငံတကာ ကွန်ဖရင့်တွေမှာ အာကျယ်နေသူတွေ၊ စာတမ်းဖတ်ပွဲတွေမှာ ဒါကဟိုလို မဖြစ်နိုင်ဖူးလား ဒီလိုမဖြစ်နိုင်ဖူးလား အရစ်ရှည်နေသူတွေ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးတွေ၊ သားရဲ တိရစ္ဆာန်ထိန်းသိမ်းရေးတွေ မှာ ထပွက်နေသူတွေ၊ ဖန်လုံအိမ်နိယာမကို ထိန်းချုပ်ဖို့ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေ အကုန်စုစည်းမိတဲ့အခါ မိမိနိုင်ငံထွက် ဖန်လုံအိမ်ဓါတ်ငွေ့ပမာဏအတွက် အလျှော့အတင်းလုပ်ဖို့ အငြင်းအခုံပြုသူတွေ၊ အဲဒီ Emission Credits တွေကို ရောင်းစားတဲ့ ဈေးကွက် ပေါ်လာဖို့ ဆွေးနွေးသူတွေ၊ ဟာ မြန်မာတွေ ဖြစ်လာလိမ့်မယ်…။ ဘာပဲပြောပြော နေရာတကာ စွာကျယ်စွာကျယ်လုပ်ချင်တဲ့ ၀သီဟာ နဂိုကတည်းက ရှိပြီးသားမဟုတ်လား…။ ကမ္ဘာ့တက္ကသိုလ်တွေကမြန်မာ့တက္ကသိုလ်တွေကို အဆင့်တစ်နေရာပေးလာတာတွေ လည်း ရှိလာလိမ့်မယ်…။ အဲဒီတက္ကသိုလ်တွေမှာ နောက်လူတွေကလည်း အဆင့်ညှိ စာမေးပွဲတွေဖြေစရာမလိုပဲ တော်သူ ထက်သူတွေကိုမှီးလို့ နောက်လူတွေလည်း နေရာရလာလိမ့်မယ်။ နောက်လူကလည်း ရှေ့တစ်ယောက်တော်တာနဲ့ ကပ်လိုက်ဖို့ လူအထင်ကြီး အင်္ဂလိပ်စကား၊ စာတော့ ကျွမ်းရလိမ့်မယ်။ ဒါတွေဟာ အထက်တန်းဆင့်ပြီးတာနဲ့ အိုကေနေပြီးသားဖြစ်ရမယ်..။ ဒါတွေဟာ တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာ အထက်တန်းဆင့်ပြီးသားကျောင်းသားမှန်သမျှ ဖြစ်နေရမယ့် အခြေအနေပေါ့။ မြန်မာကို အလျှင်အမြန်တိုးတက်စေတဲ့ နည်းတနည်းပဲ…။ စိတ်ကူးယဉ်တာများသွားပြီ မနက်ဖြန် အတွက်တရေးတော့အိပ်မှဖြစ်တော့မယ်..။
Posted by မင်းညို at 3:20 AM
မမရေ အတွေးလေး ကောင်းတယ်နော်။
မမပြောသလို တကယ်လုပ်နိုင်ရင် အကောင်းဆုံးပေါ့မမရယ်။
တို့ကတော့ simple stupid ဟုတ်ဘူးဟေ့။ complex intelligent ပဲ။ နင်ပြောတယ်မလား မြန်မာတွေက စွာကျယ်စွာကျယ်လုပ်တဲ့ ၀သီရှိဆို။ ဟေး ဟေး။
ဟုတ်တော့ ဟုတ်တယ်။ ရုံးတိုင်း ကျောင်းတိုင်း အလုပ်ခွင်တိုင်းမှာ ကြည့်လိုက် မြန်မာတွေက စွာကျယ်တွေ ချည့်ပဲ။ ငါက စလို့ပေါ့။ ဟီး
တော်တော် ကောင်းတဲ့ စိတ်ကူးလေးပဲနော..
စိတ်ကူးလေးကို အမြင်အာရုံထဲမှာ ပုံဖော်ကြည့်မိတယ် တကယ်ဖြစ်ခဲ့ရင် အကောင်းဆုံးပဲနော်....
မြန်မာနိုင်ငံက ပညာရေး အကြီးအကဲ တစ်ယောက်ဖတ်မိသွားပြီး နိုင်ငံတိုးတက်ဖို့
သူ သို့ မဟုတ် သူမ ဖတ်မိပါစေ။
အိပ်ယာမ၀င်ခင် အတွေးတွေကို ဖတ်ပြီး
ပညာသင်ရေးစနစ် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းကစ ....ဆုံးစမရှိ အကြောင်းချင်းရာ များစွာကို တွေးမိပါရဲ့ ။
ESL အင်္ဂလိပ်စာ - ကျောင်းစဖွင်ပြီလို့ရေးတော့ မေးပါတယ်။ ဘာသင်တဲ့ကျောင်းလဲ ဆရာတဲ့။ ကျောင်းအကြောင်း နည်းနည်း နည်းနည်း ရေးထားပြီး။ တယောက်က မေးဖူးတယ်။ အခုမှ အမေရိကားရောက်တဲ့သူေ...
My Life Will Go On, The Picture of Junior Win by Junior Win - မြန်မာလို မပြန်ခင် အ၈်လိပ်လို အရင်ထွက်လိုက်တာပါ။ ကိုယ့်ဘ၀ကောက်ကြောင်းတွေ ကို မြန်မာလိုထက် အ၈်လိပ်လို ချရေးလိုက်တော့ ပိုပြီး ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း နဲ့ လွ...
မြန်မာနိုင်ငံ မြစ်ချောင်းများဆိုင်ရာ ကွန်ယက် (BRN)
တာလုံရွာသားများ၏ သဘောထားထုတ်ပြန်ကြေငြာချက် - *တာလုံရွာသားများ၏ သဘောထားထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်* ၈ ရက်၊ မတ်လ၊ ၂၀၁၈ *ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း သီပေါမြို့နယ်ရှိ နမ္မတူမြစ်(ခေါ်)မြစ်ငယ်မြစ်ပေါ်တွင် တည်ဆောက်မည့်...
shwezinu: ဒေါက်တာစိုးလွင် ၏ မိုက်ကယ်ရယ်၊ သော်တာဆွေရယ်၊ လူနာတစ်ယောက်ရယ်၊ ကျွန်တော်ရယ် - shwezinu: ဒေါက်တာစိုးလွင် ၏ မိုက်ကယ်ရယ်၊ သော်တာဆွေရယ်၊ လူနာတစ်ယောက်ရယ်၊ ကျွန်တော်ရယ်
Greetings from Poland - The PKIN building of Warsaw where European Association of Osseointegration Conference is being held. Trains and buses at the heart of Warsaw city Dea...
Two bad bricks by Ajan Brahm - အုတ်ရွဲ့လေး ၂ ချပ် ၁၉၈၃ လောက်က ဘုန်းကြီးတို့ Serpentine ကျောင်းအတွက် မြေ၀ယ်တယ်။ အကြွေးတွေတင်တယ်။ မြေကလွဲလို့ နေစရာ ဘာအဆောက်အဦမှ မရှိဘူး။ ကျောင်းနဲ့တူတာဆိ...
pengobatan wasir ambeien - *pengobatan wasir ambeien* - Ambeien atau sering disebut wasir adalah penyakit atau gangguan pada anus dimana Sphinchter Ani atau bibir anus, mengalami pem...
- Only In Myanmar... မြန်မာပြည်မှာပဲရှိပါသည်.... ယခင်ကတော့ Only in Russia ဆိုတဲ့ ဓါတ်ပုံများနဲ့ ပို့ စ်တွေတင်ခဲ့ ဘူးပါတယ်တယ်...အခုတော့ ရွှေပြည် ကြီးမှာပြန်ရေ...
အမှိုက်ပစ်ခြင်း အနုပညာ - *အမှိုက်ပစ်ခြင်း အနုပညာ* ဒီနေ့ မနက် အိပ်ယာကနိုးခါက လမ်းထဲမှာ ပျိုပျိုအိုအို လူကြီးလူငယ် အားလုံးဝမ်းသာအားရ အော်ဟစ်သံတွေနဲ့ တစ်နေရာကို စုပြုံသွားကြတာကိုတေ...
(၂၀၁၄) နှစ်အကုန်မှာ နားလည်သလောက်ရေးတဲ့စာ - ပျော်ရွှင်မှုတွေရှိတဲ့ သူတွေကိုမြင်တွေ့ကြားသိရခြင်းကလည်း မင်္ဂလာတပါး အတိတ်ကုသိုလ်ကံတစ်ပါးပါပဲ....အဲဒီအပေါ်အယူမှားအသိမှား အမြင်မှားခဲ့ရင် အနာဂတ်အတွက် အကုသိုလ်က...
- မျက်စောင်း သံစောင်းထက် ရေစောင်း ထက်သတဲ့ မြစ်ကမ်းဖက် မနေမိတော့ မသိဘူးကွယ်။ ရေစောင်းထက် လေစောင်းထက်သတဲ့ မုန်တိုင်း သက်တာ မကြုံဖူးတော့ မယုံဘူးကွယ်။ လေစောင်...
မြန်မာ့ အိုး - ကျနော်တို့ အိုးတွေအကြောင်း နည်းနည်းလောက်ဖြစ်ဖြစ် ပြောကြည့်ရအောင်ပါ။ စာရေးဆရာ ချစ်စံဝင်းက တကောင်း ပျူ အိုးများဆိုပြီး စာအုပ်တစ်အုပ် ထုတ်ပါတယ်။ စာမျက်နှာ အစ...
(စဉျးစားစရာလေးတှေ) - စဉျးစားစရာလေးတှေ စာအုပျအမညျ = စဉျးစားစရာလေးတှေ ရေးသားသူ = အောငျသငျး ဖိုငျအမြိုးအစား = PDF ဒေါငျးလုပျ = http://www.mediafire.com/view/?q11al763fxv6uol
ခွဲခွာချိန် - နှုတ်ဆက်တာခြင်း တူပေမယ့် အနည်းဆုံးတော့ ဆုံစည်းဖို့အတွက်လား … ခွဲခွာဖို့အတွက်လား …. ဆိုတာကိုတော့ သိသင့်တာပေါ့…. ကွန်ပျူတာကိုပိတ်… လက်ဆွဲအိတ်ထဲထည့်…အထုပ်အပိုးေ...
Death, does it help us live? - သေခြင်းတရား၊ ဘ၀ကို အကျိုးပြုသလား? သေမယ်မှန်း သိတာ ဘ၀ကို အကျိုးပြုသလား။ ဘယ်လို အကျိုးပြုတာလဲ။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ဘ၀ကို ပေါ့ပေါ့တန်တန် သဘောထားတတ်ကြတယ်။ အထူးသဖြင...
Want to activate GodMode in Windows 7? Here's how! - Windows7users are all abuzz about the OS and its GodMode. If you haven't heard of it, GodMode isafeature that was revealed by CNet's Microsoft Correspo...
Gmail ပုံပြင် - "အဲသည့် မြှားတံလေး ဖြောင့်တန်းစွာ သွားနိုင်ဖို့ တစ်ဘဝ စာ အပိတ်ခံလိုက်ရတဲ့ မျက်လုံး တစ်ဘက်ဟာ ငါ ပါ ...." (သော်တာ) -----------------------------------------...
- သူငယ်ချင်းတို့ရေ http://www.myanmarreader.co.cc/ ကိုအိမ်ပြောင်းလိုက်ပြီးနော် ကျေးဇုးပြုပြီး အဲ့ဒီနေရာကို လာရောက်ခဲ့ကြပါလို့ ပြောကြားအပ်ပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံ ဆန္ဒပြပွဲမှ ဓါတ်ပုံများ အကြောင်း - ထိုင်းနိုင်ငံ ဆန္ဒပြပွဲမှ ဓါတ်ပုံများ အကြောင်း ဒါကတော့ တစ်ကမ္ဘာလုံးက Amazing Thailand လို့ အောချလောက်တဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံက အတိုက်အခံ PAD ပါတီဝန်များက PPP ပါတီမှ...
My Blog .... My Place
သတင်းခေတ်ထဲက ငပျင်း နဲ့ အရူးချေးပန်း
Forward Email နဲ့ စပ်မိစပ်ရာ
ခေတ်သုံးခေတ် နှင့် ဇာတ်ပွဲများ
ဒိုင်ယာရီ နဲ့ အဟောင်းသံသရာ
Göttingen and Gänseliesel
ညနေ ၉နာရီတိုင်း မဟာဆန်ကိုကသိကအောက်လုပ်သောအရာများ
Hamburg က လည်စရာလေးတွေ
+/- ခရီးသွား မှတ်တမ်း
Vatican City: ရောမကို ရောက်ခဲ့တယ် (၂)
Street Dance I've enjoyed in Roma
ရောမကို ရောက်ခဲ့တယ် (၁)
ဗင်းနစ် (Venice) မြို့ သွားမှတ်တမ်း
ဖယောင်းရုပ်တု ပြတိုက်သို့ တစ်ခေါက်
ဘယ်လင်း (Berlin)သို့ တစ်ခေါက်
+/- ကိုးကွယ်၊ ယုံကြည်မှုအကြောင်း
ခန္ဓာငါးပါးကို မြန်မာလို သဘောပေါက် သိမြင်နိုင်ကြပါစေ
ပုဗ္ဗဏှသုတ် ပါဋ္ဌိ နှင့် မြန်မာပြန်
ပဋ္ဌာန်း ၂၄ ပစ္စည်းအကျဉ်း
ပြည်ကြီးငါ ဆီပြန် နဲ့ ပဲ ဆူးပုပ်ကြော်
+/- ကိုယ်တိုင်ရေး ၀တ္တုများ
စက်ရုပ်လူ နှင့် လူစက်ရုပ်(၂)
စက်ရုပ်လူ နှင့် လူစက်ရုပ်(၁)
+/- သတင်း အချက်အလက်
ကျားမာယာ (၀ါ) မန်ကျည်းကိုးပင် ရွာသားများ
ဂျာမနီတွင် အချဉ်ရွက် အရှာထွက်ခြင်း
မြေကမ္ဘာကို အလည်လာတဲ့ ပန်းကန်ပြားပျံလော
Verkaufsoffener Sonntag တနင်္ဂနွေ ဈေးပွဲတော်
Acient Great Traveller; Marcopolo
ရေကူးသူများ သတိ၊ ရှူရှူမပေါက်ရ။
အသီးတစ်ရာ အညှာတစ်ခု (my animation art)
ဘလော့ဂ်ရွာ (my animation art)
နှင်းတွေကြားက မြို့  (သို့) ၃၀.၁၀.၂၀၀၈ အမှတ်တရ
သူ့အရပ်၊ သူ့နတ်နဲ့ သီတင်းကျွတ်
ကမ္ဘာ့မိန်းမချောတို့ရဲ့  ပီဒီယား
Celebrities တို့ ရဲ့  ပီဒီယား
Shwe AMyu Tay magazine
Postcard တွေထဲက အောက်မေ့ဖွယ် မြန်မာ
ရှေးခေတ်မြန်မာများအကြောင်း စာတမ်းတွေ ဆွဲချမယ်
ရှေးခေတ် ဟောင်း ကိုလေ့လာမယ်
အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင် ၂
engineer4myanmar
Allergy Info Hamburg
မြန်မာ အောင်ဘာလေထီ တိုက်ရန်